Mandefa Fanafihana Blaogera Ny Governemanta Nizeriàna · Global Voices teny Malagasy
Mandefa Fanafihana Blaogera Ny Governemanta Nizeriàna
Voadika ny 17 Janoary 2019 12:03 GMT
Vao nanomboka “ady iray mitentina 5 tapitrisa dolara” hamelezana ireo blaogera sy ireo media anaty tambajotra,toy ny Sahara Reporters, ny governemanta nizeriàna.
.Loharanom-baovao fiarovana telo, izay mahalala ilay drafitra, no namboraka fa tamin'ny herinandro lasa teo dia nankasitrahan'i Yar’adua ny asa miafina mba hanakanana ireo vohikala Web sy ireo blaogera mahatarika ny saim-bahoaka ao Nizeria. Hahazo ny vola ilaina amin'ireo asa ireo ny lehiben'ny mpanolotsaina ara-toe-karena ny filoham-pirenena, Tanimu Kurfi.
Amin'ny lafiny iray, vaovao tsara io raha toa tsapan'ny governemanta nizeriana ny tanjak'ireo median'ny olom-pirenena ary arahintsika maso sy iverenantsika isaky ny dingana ataon'izy ireo. Amin'ny lafiny iray indray, tena loza io ho an'ireo blaogera ao amin'ny firenena sy ho an'ireo any ivelany mety haniry ny hody an-tanindrazana, na hanao fialantsasatra fohy izany, na noho ny asa, na hijanona tanteraka any. Samy tonga saina avokoa isika rehetra momba ny nanjo ireo blaogera roa [Jonathan Elendu sy Emeka Asiwe] tamin'ny taona lasa, izay nifanena sy nofonjain'ireo mpiasan'ny fiarovana raha iny ry zareo teo am-pahatongavana tao amin'ny seranam-piaramanidina Abuja iny.
Ny tetiky ny governemanta izay mitovy amin'ny sarimihetsika fitsikilovana [angamba betsaka ny marina any anatin'ireny sarimihetsika ireny] dia ny fanakaramàna Nizeriàna “700” ao an-toerana sy any ivelany mba hanao “blaogy” manasohaso ny filoham-pirenena sy ny governemantany. Ary mitovy amin'ireo mpiasa amin'ny governemanta erantany, omena tambiny ireo olona ireo, amin'ity tranga ity, dia “vatsy ho an'ny blaogera”.
“Tapa-kevitra ny governemanta fa hanetsika olona vitsivitsy mba hametraka sehatra fifampiresahana ety anaty tambajotra izay hahafahana manitatra ireo sisintanin'ny asa fanaovana gazety anaty tambajotra”, hoy ny nambaran'ny loharanom-baovao fiarovana iray. Nanampy izy fa, ao anatin'ireo dingana voalohany, ireo vohikala dia hamoaka tantara vitsivitsy amin'ny antsipirihany sy toa azo itokisana, notefena mihitsy mba hahazoan'izy ireo fahombiazana, ary hahazo mpamaky midadasika. “Nefa ny tanjona faratampony dia ny famadihana ny vohikala hanao ny asan'ny “alika mpanenjika” an'ireo mpitsikera ny governemanta ety anaty tambajotra”, hoy ny loharanom-baovao. Nanampy izy fa tetiky ny governemanta ny hamatsy vola ary hanaparitaka vohikala vaovao manodidina ny 50, manomboka eto sy hatramin'ny fiantombohan'ny fanentanana matotra ho an'ny fihodinana manaraka amin'ireo fifidianana heverina ho amin'ny taona 2011.
Koa inona no ataontsika, isika tena blaogera ? Mialoha ny zava-drehetra, tokony arahintsika maso ireny fahavalom-bahoaka ireny! Raha toa ianao ka blaogera manoratra zavatra tsara mikasika an'i Yar’Adua sy Goodluck, azo antoka ny hiheverena anao ho toy ny “orinasa” an'ny governemanta, izay mampalahelo, satria mety hisy ireo mpiandany tsy mihatsara ivelantsihy manohana an'iofitondràna io na tsy tena demokratika aza io. Io fieboeboana amin'ny demokrasia io no loza ao anatin'io sy ny governemantan'i Obasanjo. Anjarantsika araka izany ry blaogera, sy vohikalam-baovao, ny mampahafantatra ny laingan'i Nizeria ilazany ho Fanjakana demokratika misy fampahalalam-baovao malalaka. Tsy izay. Ny governemanta izay mandefa fiara mifono vy sy mpidaroka baomba amin'ny vahoakany dia tsy governemanta demokratika mihitsy. Ny governemanta iray izay mandefa ny miaramilany mba hanafika ny vahoaka ary mandà ireo famonoana fahatrany nataon'ireo tafika mitàm-piadiana ao aminy, izay isika no vavolombelona tamin'ny lahatsary, dia tsy demokratika velively. Izay ananantsika dia governemanta mpanao kolikoly vonona ny hambotry ny vahoaka ao amin'ny Delta du Niger, tsy hisitraka ny hareny sy zo maha olombelona azy.
Sahala amin'ny tao Choba ihany, rehefa nolavin'i Obasanjo ireo sarinà miaramila nanolana vehivavy, dia nisafidy koa ny tafika ny handà ho tsy namono tovolahy roa. Tsy tsara kokoa nataon'ny fitsarana ve raha toa ny tafika nifidy ny hanadihady mikasika ny famonoana nataon'ny JTF? Ho hitanareo eto ambany ny valiny avy amin'ny Nigeria Army Public Relations Unit tamin'ilay lahatsary.
Tonga fantatry ny Joint Task Force (JTF), Operation Restore Hope, hoe ny MEND, noho ny tsy fahombiazany tamin'ny fampiasana herisetra sy ireo fikasana teo aloha handetika ny anaranay, dia nandefa fanentanana vaovao hafa ihany koa hanendrikendrehana ny hery fiarovana sy ireo komandà ao aminy ho nanely lahatsary noforomporonina sy nolalaovina mba ho… Vakio ny Moredepict, fanolanana sy famonoana tsy nandalo fitsaràna nataon'ny JTF tao amin'ny Delta de Niger. Nampitaina any amin'ireo olona ambony iraisampirenena ireny lahatsary voaomana ireny ankehitriny ho fitsapàna alahelo, raha toa ireo media izay nampiasain'izy ireo hatramin'izao tsy mangoraka intsonyn ny tolony noho ny famonoana sy ny fanentanana fanaratsiana ataon'io vatana tsy misy endrika io”, hoy i Abubakar. Col. Rabe Abubakar Commander Joint Task Force (JTF), Operation Restore Hope.
Ny MEND (Hetsika ho an'ny fanafahana ny Delta du Niger ) dia niantso ny ONU mba hanadihady momba ireo lazaina fa famonoana tsy nandalo fitsarana sy ireo fanolanana nataon'ny JTF nandritra ireo hetsika miaramila natao vao haingana tao Oporoza sy tany anatin'ireo vondrom-piarahamonina hafa an'ny Fanjakana Gbaramatu, ao anatin'ny Fanjakana Delta.